बिरामी प्रियंकालाई केको सास्ती ? (फोटो फिचर) « Ramailo छ
बिरामी प्रियंकालाई केको सास्ती ? (फोटो फिचर)
केकी अधिकारीले निर्माण गर्ने फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ को प्रेसमिटमा नायिका प्रियंका कार्की फरक अवतारमा प्रस्तुत भइन् । प्रायः जसो ईभेन्टमा ‘हट’ रुपमा प्रस्तुत हुने प्रियंका ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’मा भने स्याड मुडमा प्रस्तुत भइन् । किन त ? सन्चो छैन । दाँत दुखिराछ । यद्पी प्रियंका यसै सातादेखि फिल्म ‘सत्रु गते’ को छायाँकनमा व्यस्त हुनेछिन् भने ‘फाटेको जुत्ता’को प्रचारमा पनि लागि रहेकी छिन् । बिरामी प्रियंकालाई तीन तस्बिरमा हेर्नुस् :